The MYAWADY Daily: December 2017
31 12 2017 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
31 12 2017 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်တွင် မြန်မာမျိုးရင်း ပန်းများနှင့် အတူ တရုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ပန်းအမျိုးအစား ၄ မျိုးအပါအဝင် ပန်းပင် ၁၇၃ဝဝဝကျော် ပြသထား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပ မြဲဖစ်သည့် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပန်းပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ စတင်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ မြန်မာမျိုးရင်း ပန်းများနှင့်အတူ တရုတ်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ မှာယူတင်သွင်းစိုက်ပျိုးသည့် ပန်းအမျိုးအစား ၄၈ မျိုးအပါအဝင် အရောင်ကွဲပန်းပင် ၁၇၃ဝဝဝ ကျော် ပြသထားကြောင်း အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးဝေမျိုးအောင်ထံမှ သိရသည်။
ယခုနှစ်ပန်းပွဲတော်တွင် ပြသသည့်ပန်းများ စိုက်ပျိုးရာတွင် ရာသီဥတုကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရာ၌ အခက်အခဲများရှိခဲ့ပြီး ပန်းပျိုးပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း နှစ်သိန်းကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ ၁၇၃ဝဝဝကျော်သာ အောင်မြင် ခဲ့ကြောင်း၊ (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပြင်ဦးလွင် ပန်းပွဲတော်အတွက်ပြည်ပမှ ပန်းမျိုးစေ့ငွေကျပ်သိန်း ၈ဝ ကျော်ဖိုးဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ ပန်းပွဲတော်ကို ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုအရောင်စုံ၍ သာယာလှပစွာပြသနိုင်ရန် ဆောင်းဥတုပန်းများကိုသာ ဦးစားပေးစိုက်ပျိုး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ပန်းပွဲတော်က ပြည်တွင်း အကြိုက်ပွဲတော်အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာရောက်ပေမယ့် ပုံမှန်လာနေကျ ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ပန်းပွဲတော်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာတာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါကိုအများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ ပန်းပွဲတော်ရက်ထပ်တိုးဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး"ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောပြသည်။
ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်တွင် နှစ်စဉ်ပန်းများဖြင့် ဖန်တီးပုံဖော်ထားသော ရုပ်လုံး၊ ရုပ်ကြွများ၊ စာလုံးသရုပ်ဖော်မှုများ စသောဖန်တီးမှု များကို ပန်းအတုများဖြင့်သာ ပြုလုပ်နိုင်ရာ ယခုနှစ်တွင် ပန်းအတု၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ ထည့်သွင်းအသုံးပြု၍ အလှဖန်တီးထားကြောင်း ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
Posted by myawady at 4:27 PM 1 comment:
ပုဂံယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှ ငလျင်ဒဏ်သင့် စေတီပုထိုးများနှင့် အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ပြုပြင်မှု တစ်ဝက်ကျော်ပြီးစီးနေ
ပုဂံယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမှ ငလျင်ဒဏ်သင့် စေတီပုထိုးများနှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ပြုပြင်မှု လုပ်ငန်းများ တစ်ဝက်ကျော်ဆောင်ရွက် ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန သတင်းများအရ သိရသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်ကြောင့် ပုဂံယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေအတွင်းရှိ ဘုရားစေတီပုထိုးနှင့် သာသနိက အဆောက်အအုံအချို့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါစေတီပုထိုးများ၏ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အခြေအနေအရ ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ကာ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အလှူရှင်များ၊ မူလအလှူရှင်များကလည်း အလှူငွေများထည့်ဝင်လှူဒါန်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ စေတီပုထိုးများနှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှေးဟောင်းလက်ရာများ မပျက်စီးစေရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များ နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ မွမ်းမံပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများကို ၂ဝ၂ဝပြည့်နှစ်တွင် အပြီးသတ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါငလျင်ဒဏ်သင့် စေတီပုထိုးများနှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ပြန်လည် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ တစ်ဝက်ကျော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး နေပြီဖြစ်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါငလျင် လှုပ်ခတ်စဉ်က ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဟု ထင်ခဲ့သည့် စေတီပုထိုးများမှာလည်း ပြင်ပထိခိုက်မှု မရှိခဲ့သော်လည်း အတွင်းပိုင်းထိခိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ပညာရှင်များက အကြိမ်ကြိမ်လေ့လာစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုများအရ ငလျင်လှုပ်ခဲ့စဉ်က ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိခဲ့ဟုထင်ရသည့် သဗ္ဗညုစေတီသည် ယူနက်စကို၊ ဂျပန်၊ထိုင်း၊ တရုတ်စသည့် ပြည်ပပညာရှင်များနှင့် ပြည်တွင်းမှ ပညာရှင်များ၏ အကြိမ်ကြိမ်လေ့လာ စစ်ဆေးမှုများအရ အတွင်းကြေဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်မြို့၌ မီးအားမြှင့်စက် အပူလွန်ကဲ၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့ဆင်စုရပ်ကွက် မြောင်းကြီးတန်းလမ်းတွင် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်က မီးအားမြှင့်စက်မှ အပူလွန်ကဲပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြောင်းကြီးတန်း လမ်းဘေးနေ ကိုအောင်ဇင်မိုး၏ ပေ (၃ဝ​×၂ဝ) သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာနေအိမ်အတွင်းရှိ မီးအားမြှင့်စက်မှအပူလွန်ကဲပြီး မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ ကိုအောင်ဇင်မိုး၏ နေအိမ်မှတစ်ဆင့် ကိုပူတူ (ဆောင်းဘောက် ပြုပြင်ရေး) ၏ ပေ (၃ဝ×၂ဝ) ရှိ နေအိမ်တစ်ခြမ်းသို့ မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ နေအိမ်များနှင့်အတွင်းပစ္စည်း စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၁ဝဝဝဝဝဝ ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမီးလောင်ရာသို့ ပြည်မြို့ပေါ်ရှိ သန္ဓေမီးသတ်ကား ခုနစ်စီး၊ အရန်မီးသတ်ယာဉ်၁၅စီး စုစုပေါင်း ၂၂စီး၊ ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူး အပါအဝင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၅ ဦး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၉ဝ တို့က ဝိုင်းဝန်း မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက် ၈ နာရီ ၁ဝ မိနစ်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ အောင်ဇင်မိုးကို ပြည်မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၂၈၅ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပုလဲ-ဂန့်ဂေါ ကားလမ်းတွင် အဖျက်အမှောင့် ပြုလုပ်လိုသူများနှင့် တရားမဝင်သစ်များ ခိုးယူမှုမရှိစေရေး မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်များကို ရှာဖွေစစ်ဆေး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင် ပုလဲမြို့ ပုလဲ-ဂန့်ဂေါကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၈/၆) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်၌ ခေတ္တမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးမြင့်အောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီက ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် အဖျက်အမှောင့်ပြုလုပ် လိုသူများ ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေး၊ တရားမဝင်သစ်များ ခိုးယူသယ်ဆောင်မှု မရှိစေရေးနှင့် ဖမ်းဆီးရမိ စေရေးအတွက် ပိတ်ဆို့ ရှာဖွေစစ် ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပုလဲမြို့ ပုလဲ-ဂန့်ဂေါကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၈/၆)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေး ဂိတ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည့် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြို့နယ်သစ်တောဦးစီး ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းကို အရှိန်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပုလဲမြို့မရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုတိယရဲအုပ် လင်းလင်းထွန်း၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ ဆန်ဈေးကွက်သို့ ရွှေဘိုဘေးကျား ပေါ်ဆန်းနှင့် ဆန်ကြမ်းဆန်အသစ်များ ဈေးအမြင့်ဖြင့် စတင်ဝင်ရောက်လာ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မန္တလေးဆန်ဈေး ကွက်အတွင်းသို့ ရွှေဘိုဘေးကျား ပေါ်ဆန်းဆန်အသစ်နှင့် ဆန်ကြမ်းဆန်အသစ်များ ဈေးအမြင့်ဖြင့် စတင်ဝင်ရောက်လာကြောင်း မန္တလေးမြို့ဆန်ကုန်သည် အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
ရွှေဘိုဘေးကျား ပေါ်ဆန်းဆန် အသစ်များမှာ ယခင်နှစ် ဆန်သစ်ပေါ်ချိန် ဈေးနှုန်းထက် တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ်ငါးထောင်ခန့် ဈေးအမြင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်လာပြီး ဆန်ကြမ်းဆန် အသစ်များမှာလည်း ယခင်နှစ်ကထက် တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ်၂ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝခန့်ဈေးအမြင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။
"ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းက အဟောင်းဈေးက မြင့်နေတော့ အသစ်ကလဲ အမြင့်ဈေးနဲ့ ဝင်လာတာပါ။ အရင်နှစ်က သင်္ကြန်ကာလ ပြီးမှရောက်တဲ့ ဈေးနဲ့ စဝင်လာတယ်။ ဒီနှစ်မှာဆန်သစ်တွေ အားလုံးအမြင့်ဈေးတွေနဲ့ ပဲဝင်လာတာပါ။ အရောင်းအဝယ် အေးပေမယ့် ဈေးကျဖို့ အနေအထားတော့ မရှိပါဘူး"ဟု မန္တလေးမြို့ဆန်ကုန်သည် ဦးသိန်းဇော်က ပြောပြသည်။
လက်ရှိတွင် ရာသီဥတုအေးခြင်းနှင့် နယ်မြေ မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ဆန်အရောင်းအဝယ် အေးလျက်ရှိပြီး ဆန်ဟောင်းများ လက်ကျန်နည်းချိန်နှင့် ဆန်သစ်များ စပေါ်ချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်ဈေးနှုန်းမငြိမ်သေးဘဲ နောက်တစ်လခန့်အကြာ နယ်စုံမှဆန်သစ်များ ဝင်ရောက်ချိန်မှသာ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိဆန်ဈေး နှုန်းများမှာ တစ်အိတ်လျှင် ရွှေဘိုဘေးကျား ပေါ်ဆန်း (အဟောင်း) တစ်အိမ်လျှင် ငွေကျပ် ၅၆ဝဝဝမှ ငွေကျပ် ၅၇ဝဝဝ၊ ရွှေဘိုဘေးကျားပေါ်ဆန်း( အသစ်) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ် ၄၄ဝဝဝ မှငွေကျပ် ၄၅ဝဝဝ၊ ရန်ကုန်ပေါ်ဆန်း (အဟောင်း) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ် ၄၈ဝဝဝ၊ ရန်ကုန်ပေ ဆန်း (အသစ်) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ်၃၃ဝဝဝမှငွေကျပ် ၃၉ဝဝဝ၊ လမ်းသုခ (အသစ်)တစ်အိတ်လျှင်ငွေ ကျပ်၂၁ဝဝဝမှ ငွေကျပ်၂၂ဝဝဝ၊ ကောက်ညှင်း (ရန်ကုန်) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ်၂၉ဝဝဝမှ ငွေကျပ် ၃ဝဝဝဝ၊ ကောက်ညှင်း (ကောလင်း) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ် ၂၄ဝဝဝမှ ငွေကျပ်၂၆ဝဝဝ၊ မဂျမ်းတော (အသစ်)တစ်အိတ်လျှင်ငွေကျပ်၃၅ဝဝဝမှငွေကျပ် ၃၆ဝဝဝ၊ မဂျမ်းတော (အဟောင်း) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ် ၄၇ဝဝဝ မှငွေကျပ် ၄၈ဝဝဝ၊ မြီးကောက် (အဟောင်း) တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ်၂၈ဝဝဝမှ ငွေကျပ်၂၈၅ဝဝ၊ လုံးသွယ်မွှေး တစ်အိတ်လျှင် ငွေကျပ်၃၃ဝဝဝမှ ငွေကျပ် ၃၇၅ဝဝတို့ဖြစ်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များထံမှ သိရသည်။
Posted by myawady at 4:08 PM No comments:
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ သိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၅)နှင့် အမျိုးသမီး သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်ချီးမြှင့်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅) နှင့်အမျိုးသမီးသူနာပြု သိပ္ပံဘွဲ့သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်စဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ မြဝတီအငြိမ့်အဖွဲ့၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကို ကြည့်ရှုအားပေးစဉ်။
တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၅) နှင့် အမျိုးသမီးသူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ တပ်တော် ဆေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်း သဘင်ခန်းမဆောင်၌ကျင်းပရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။
အဆိုပါသင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်းနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်အောင်မြင့်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ တပ်မတော် သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်တော်များ၊ သင်တန်းဆင်းသူနာပြုများနှင့် မိဘဆွေမျိုးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် သင်တန်းဆင်းသူနာပြုများအား တစ်ဦးချင်းရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်သည်။ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် သင်တန်းဆင်း သူနာပြုများ၊ မိဘဆွေမျိုးများနှင့်အတူ ညစာသုံးဆောင်ကြသည်။
ညစာသုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကွပ်ကဲမှု အောက် မြ၀တီတေးဂီတအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဖက်ပညာတက္ကသိုလ် ဂုဏ်ပြုစစ်တီးဝိုင်း တပ်ဖွဲ့ တို့က တေးသီချင်းများဖြင့် သီဆိုတီးမှုတ် ဖျော်ဖြေကြသည်။
သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင်၌ မြ၀တီတေးဂီတ အဖွဲ့နှင့်မြ၀တီအငြိမ့် အဖွဲ့တို့၏ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကို ကြည့်ရှုအားပေး ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျွမ်းကျင်ကူညီ၊ ဆေးစစ်သည် ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသည် စစ်သည်များကို နှစ်စဉ်လေ့ကျင့် မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသိပံ္ပဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ် စဉ် (၁၅) နှင့် အမျိုးသမီးသူနာပြု သိပံ္ပဘွဲ့သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်း ဆင်းဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် သင်တန်းတပ်ခွဲများကိုစစ်ဆေးစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်အကောင်းဆုံး သင်တန်းသားဆုရရှိသူ သင်တန်းသားအမှတ် ၃၈၁၅၊ သင်တန်းသားဝေဖြိုးဟိန်းအား ဆုချီးမြှင့်စဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်အကောင်းဆုံး သင်တန်းသူဆုရရှိသူ သင်တန်းသူအမှတ် ၁၃၅၊ သင်တန်းသူနန်းရဝေပိုင်အား ဆုချီးမြှင့်စဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် စစ်ဆင်ရေးတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု ကုသခြင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့် သရုပ်ပြမှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်။
ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့များ၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်မှာ တပ်မတော်သားမိသားစုဝင်များကို ပြည့်စုံလုံလောက်သည့် ဆေးအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ တက္ကသိုလ်သည် “ကျွမ်းကျင်ကူညီ၊ ဆေးစစ်သည်” ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသည် စစ်သည်များကိုနှစ်စဉ် လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးလျက် ရှိကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် စစ်ရေးပြကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ သိပ္ပံဘွဲ့သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅) နှင့် အမျိုးသမီး သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇေယျကျော်ထင် တင်အောင်စန်းနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇေယျကျော်ထင် ခင်အောင်မြင့်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီး များနှင့်ဇနီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ရန်ကုန်တပ်နယ်မှ အရာရှိကြီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော် များနှင့် သင်တန်းသားသူနာပြုများ၏ မိဘဆွေမျိုးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်က သင်တန်းဆင်းတပ်ခွဲများ၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး သင်တန်းတပ်ခွဲများကို စစ်ဆေးသည်။ ထို့နောက်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်အား သင်တန်းတပ်ခွဲများက အနှေးလျှောက်၊ အမြန်လျှောက်တို့ဖြင့် ချီတက်အလေးပြု ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာသိပ္ပံဘွဲ့သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅) မှ အကောင်းဆုံးသင်တန်းသား ဆုရရှိသူ သင်တန်းသားအမှတ် ၃၈၁၅၊ သင်တန်းသား ဝေဖြိုးဟိန်း၊ လေ့ကျင့်ရေးထူးချွန်ဆုရရှိသူ သင်တန်းသားအမှတ် ၃၈၂၂၊ သင်တန်းသား သန့်စင်၊ စာပေထူးချွန်ဆုရရှိသူ သင်တန်းသားအမှတ် ၃၇၈၀၊ သင်တန်းသား စိုးခန့်အောင် တို့အား ဆုများပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။
၎င်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်မတော်သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် တပ်မတော်အမျိုးသမီး သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂) မှ အကောင်းဆုံးသင်တန်းသူဆုရရှိသူ သင်တန်းသူအမှတ် ၁၃၅ ၊သင်တန်းသူ နန်းရဝေပိုင်၊ လေ့ကျင့်ရေးထူးချွန်ဆုရရှိသူ သင်တန်းသူအမှတ် ၁၁၉၊ သင်တန်းသူစုမွန်နိုင်၊ စာပေထူးချွန်ဆုရရှိသူ သင်တန်းသူအမှတ် ၁၆၄၊ သင်တန်းသူ အေးသော်တာမင်းတို့အား ဆုများပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်က သင်တန်းသားများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် သင်တန်းကာလ ၄ နှစ်တာအတွင်း သူနာပြုကောင်း တစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းကောင်းများ နှင့်ပြည့်စုံရန်၊ သူနာပြုစိတ်ဓာတ်၏ အခြေခံဖြစ်သည့် “၀ါသနာ၊ စေတနာ၊ အကြင်နာ၊ အနစ်နာ၊ နမူနာ” ဆိုသည့် နာငါးနာကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် သူနာပြုကောင်းတစ်ဦးတွင်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ ပြည့်ဝစေရန်လည်း စာတွေ့၊လက်တွေ့ သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့အနေဖြင့် တာဝန်ကျရာ တပ်အသီးသီးတွင် တပ်မတော်သားများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ပြည်သူများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးရာတွင် ပြုစုရေးသာမက ရောဂါရှာဖွေရေး၊ ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ရောဂါနှိမ်နင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေး၊ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးနှင့် ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအထိ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းစွာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ကြရန်မှာ ကြားသည်။
ယင်းနောက် မိမိတို့တပ်မတော်သည် အရေအတွက်ထက်အရည်အချင်းကို ဦးစားပေးပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ကာယဥာဏစွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ခေတ်မီကျစ်လျစ်သည့် တပ်မတော်တစ်ရပ်အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းတည်ဆောက်သည့်နေရာတွင် တပ်မတော်သားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည် အဓိကကျသောကြောင့် မိမိတို့တပ်မတော်သားတိုင်း၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖြစ်သည့် လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်ထက်မြက်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့် တည်ဆောက်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့တည်ဆောက်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရာမှာ “စိတ်ဓာတ်၊စည်းကမ်း၊ သစ္စာ၊စည်းလုံးမှု၊ စွမ်းရည်သုံးရပ် ပြည့်စုံမှု” ဟုဆိုသည့် တပ်တိုင်းရဲဘော်တိုင်း ထားရှိရမည့် အခြေခံအရည်အချင်း ငါးပါးပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကို ခေတ်မီတပ်မတော် Standard Army တစ်ရပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ရာတွင် အင်အားတောင့်တင်း ခိုင်မာရေးသည် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်အားကို တည်ဆောက် ရာတွင် အရေအတွက်သာမက အရည်အချင်းရှိဖို့ အတွက်လည်း တည်ဆောက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေအတွက်ရှိရန်အတွက် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် အင်အားပြုန်းတီးမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပြီး အရည်အသွေး မြင့်မားစေရန်အတွက်လည်း တပ်မတော်သားတိုင်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေရန်အရေးကြီး ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့တတ်ကျွမ်းထားသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို အသုံးချပြီး တပ်မတော်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမံ ပြုစုစောင့်ရှောက် သွားကြရန်လိုကြောင်း မှာကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး ခေတ်မီပြုစုကုသမှုများနှင့် ဆေးပညာရပ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာဆည်းပူးပြီး မိမိတို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည်အသွေးမြင့်မား လာအောင် မြှင့်တင်နေကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ မြှင့်တင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦများကိုလည်း ဖြည့်တင်းပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ခေတ်မီတုံ့ပြန် လူနာတုများ၊ သူနာပြုကျွမ်းကျင်မှု လက်တွေ့ခန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သည့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ခေတ်နှင့်လျော်ညီသည့် သင်ကြားမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်း (Quality Assurance Facilities) များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် ဘက်စုံသုံးဓာတ်ခွဲခန်း (Common Laboratory) ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်လည်း စာကြည့်တိုက်များကိုပါ အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အဆိုပါ အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချရင်း လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရရှိလာသည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသည့် ခေတ်မီသူနာပြု၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ဆက်လက် ဆည်းပူလေ့လာသွားရန် လိုကြောင်း မှာကြားသည်။
ထို့နောက် ခေတ်မီဆန်းသစ်လာသည့် ဆေးပညာရပ်များကို ဆည်းပူးလေ့လာရင်း တစ်ဖက်မှလည်း မြန်မာ့ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ၏ အစွမ်းသတ္တိများကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံး ပြုနိုင်ခဲ့ကြသည့် အစဉ်အလာကောင်း များကို မေ့ပျောက်မသွားကြရန် လိုကြောင်း၊ မိမိတို့ ရှေးခေတ်မြန်မာမျိုးနွယ် ဘိုးဘေးများသည် မြန်မာ့ရေမြေ များပေါ်ရှိ အဖိုးတန်ပရဆေးပင်များကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ မိမိတို့အားသင်ကြား ပေးလိုက်သည့် ပရဆေးဗေဒဘာသာရပ်သည် သဘာဝမှရရှိသည့် ပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီး ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ရသည့်အပင်များမှ ဆေးအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပုံများကို လေ့လာရသည့် ဘာသာရပ် ဖြစ်သည့်အတွက် ပရဆေးဗေဒကိုအခြေခံပြီး ဆေးဘက်ဝင်အပင်များကို စနစ်တကျ အချိန်ယူလေ့လာခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပိုင်းများတွင် များစွာအကျိုးဖြစ် ထွန်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေးခေတ် မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုပြီး ဆေးအကာအကွယ်ပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အရည်အသွေး ထက်မြက်ပြည့်ဝသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဖြစ်ရန် အနောက်တိုင်းဆေး ပညာရပ်တွင်သာမက မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာ နယ်ပယ်တွင်ပါ ကျွမ်းဝင်နှံ့စပ်သည့် ပညာရှင်များဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းသွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီမှုသည် အရေးကြီးသည့်အတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့များသည် သမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာအရ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန်များကိုသာမက တပ်မတော်သားမိသားစုဝင်များနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့သို့ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိရာတွင် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ တောင်ပေါ်မြေပြန့်၊ ပင်လယ်၊ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများပါမကျန် တပ်မတော်နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ များစေလွှတ်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို တာဝန်သိသိ စေတနာရှိရှိ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသအတွင်းမှာရှိသည့် ပြည်သူလူထုအားလုံး အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် လူတိုင်းကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေဖို့ အရေးကြီးကြောင်း၊ တပ်မတော်က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နယ်လှည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများသည် ထိုရည်မှန်းချက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာသည်နှင့်အမျှ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး ပါမကျန် ဘက်စုံအထောက်အကူပြုနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားကြောင်း၊ ပြည်သူများကျန်းမာပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သူတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်း တိုးတက် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နယ်လှည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခြင်းလုပ်ငန်းသည် ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးကို တိုက်ရိုက်အကျိုးရှိနေသကဲ့သို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ နေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် တပ်မတော်က နိုင်ငံအနှံ့အပြား နယ်လှည့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းသည် ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန်ဆိုသည့် ကာကွယ်ရေးတာဝန်တစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နေဖြင်းဖြစ်ပြီး အထိရောက်ဆုံးသော လက်တွေ့ပါသည့် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် တာဝန်ကျရာ ဒေသအသီးသီးတွင် တတ်ကျွမ်းထားသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို အသုံးချကာပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူ ပေါက်ဖွားလာသည့် မိမိတို့ တပ်မတော်အနေဖြင့် ဖြတ်သန်း လာခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံ၊ အသိတရားများအရ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လုံးဝအထိအပွန်းမခံနိုင်သည့် အတွက် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် ဦးထိပ်ထားပြီး နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ “တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ်ထားရှိသည့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် သစ္စာတရား ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်က ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်သည့် အမျိုးသားရေးဆိုသည်မှာ မည်သည့်ခေတ်၊ မည်သည့်စနစ်တွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက် ထာဝရလိုအပ်နေသည့် ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာတွင် သမိုင်းကြောင်းအရ နိုင်ငံတော်၏ ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးတို့အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်နေသည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်လည်း တပ်မတော်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ ၆ ရပ်ချမှတ်ပြီး စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကန်စွာဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
၄င်းနောက် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပကတိအရှိတရားများအရ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးကို အမည်နာမ အမျိုးမျိုးဖြင့် နယ်မြေပိုင်းခြား သတ်မှတ်ထားသော်လည်း နယ်မြေဒေသတိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စုစည်းနေထိုင်ကြသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စု၏အသွင်သဏ္ဍာန်သည် ခွဲထွက်ခြင်း၊ ပဲ့ထွက်ခြင်း၊ ကွဲပြားခြင်း မဖြစ်စေရေး အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှင့် ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက် မည်သည့်နယ်မြေ၊ မည်သည့်ဒေသရောက်ရောက် တိုင်းရင်းသားသွေးချင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ရင့်ကျက်လာအောင် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရင်း စည်းရုံးဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုကြောင်း မှာကြားသည်။ထို့နောက် ပြည်သူ့အကျိုးကို ထာဝရစဉ်သယ်ပိုးပြီး သမိုင်းပေးတာဝန်ကျေခဲ့ခြင်းသည် မိမိတို့တပ်မတော်၏ ကောင်းမြတ်သည့် အစဉ်အလာဖြစ်သကဲ့သို့ ထူးခြားလေးနက်သည့် ၀ိသေသလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူအပေါ် တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သည့် နောင်တော်စစ်သည်များ၏ ကောင်းမြတ်သည့် အစဉ်အလာများကို အားကျအတုယူပြီး မိမိတို့တပ်တော်၏ ကောင်းမွေဆက်ခံသူ တပ်မတော်သားများ၊ ပြည်သူက အားကိုးအားထားပြုရသည့် ပြည်သူချစ်သည့် စစ်သည်တော်ကောင်းများ ဖြစ်လာ အောင်ပြုကျင့်နေထိုင်သွားကြရန် အလေးအနက်ထားမှာကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင်သည် သင်တန်းတပ်ခွဲများ၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။
စစ်ရေးပြအခမ်းအနားအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅)မှ ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့ကြသည့် သင်တန်းသားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိဘများ၊ အမျိုးသမီးသူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)မှ ထူးချွန်ဆုရရှိခဲ့ကြသည့် သင်တန်းသူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိဘများအား တွေ့ဆုံ၍ ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ပြောကြားရာတွင် ငယ်စဉ်မှစ၍ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတက်ရောက် အောင်မြင်သည်အထိ မိဘများက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ထူးချွန်ဆုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနှင့် မိမိဘ၀အား ကိုယ်တိုင် ရပ်တည်နိုင်ခြင်းသည် မိဘများ၏ ကျေးဇူးအားဆပ်ခြင်း တစ်မျိုးပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်မိဘများ၏ကျေးဇူးမှာ များပြားသောကြောင့် တစ်သက်လုံးဆပ်၍ မကုန်နိုင်သဖြင့် မိဘကျေးဇူးမမေ့ရန်လိုကြောင်း၊ သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက်ပညာ ဆိုသည်မှာ လူအများ၏ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်းဖြစ်သဖြင့် နာ ငါးနာနှင့်အညီ ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သာမန်လူနာတစ်ဦးသည် ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံခံရပါက ရောဂါတစ်ဝက် သက်သာသည်ဟုပြောကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဆေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အကြင်နာတရားကိုအမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားကြစေလိုကြောင်း၊ ရာထူးအဆင့်ပေးအပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မိမိတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု အပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ရရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းစလယ်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့မှုများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မလျှော့ဘဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကြိုးစားသွားကြစေလိုကြောင်း၊ မိမိတို့ ကွပ်ကဲရသည့်သူများကိုလည်း စည်းကမ်းလိုက်နာမှုရှိအောင် ခေါင်းဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်(၁၆)ရပ်နှင့်အညီ ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရန်လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် တိုက်တွန်းချက်စည်းကမ်း၊ တားမြစ်ချက်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုကြောင်းဖြင့် မှာကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ် ပင်မဆောင်တွင် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် နည်းဗျူဟာအဆင့် စစ်မြေပြင်ဆေးရုံနှင့် တပ်မအဆင့်ရွေ့လျား စစ်မြေပြင်ဆေးရုံများ၌ စစ်ဆင်ရေးတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုကုသခြင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သရုပ်ပြမှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပေါ်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည့် လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အကူပြု အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထပ်မံဖြည့်တင်းရန်၊ သင်တန်းသားများ လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝ ကျွမ်းကျင်သည်အထိ စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်သည်များအား မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Military nurses and paramedics being produced yearly in accordance with motto -- skilful and helpful medics
Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing takes salute of trainee companies at Passing out Parade of 15th Intake of DSINPS and 2nd Intake of Lady Nursing Sciences at parade ground of DSMA.
Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing views providing medical treatments to those injured in the military operations at battlefifi eld hospitals.
Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing receives oustanding trainees and their parents and relatives.
Photo shows outstanding trainees and their parents and relatives.
Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing presents Excellent Award in Training to Trainee No.3822 Trainee Thant Sin of the 15th Intake of DSINPS.
Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing presents Excellent Award in Training to Trainee No.119 Trainee Su Mon Naing of the 2nd Intake of Lady Nursing Sciences.
Senior military offifi cers and their wives attend Passing out Parade of 15th Intake of DSINPS and 2nd Intake of Lady Nursing Sciences at parade ground of DSMA.
Provision of sufficient medical protection and health care services for Tatmadaw members and families is the goal and the duty of the medical corps. In accordance with its motto -- skilful and helpful medics -- the Defence Services Institute of Nursing and Paramedical Sciences (DSINPS) is producing military nurses and paramedics yearly, said Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing at the Passing out Parade of 15th Intake of DSINPS and 2nd Intake of Lady Nursing Sciences held at the parade-ground of Defence Services Medical Academy in Yangon yesterday morning.
Also present on the occasion were Commander-in-Chief (Navy) Admiral Zeya Kyawhtin Tin Aung San and wife, Commander-in-Chief (Air) General Zeya Kyawhtin Khin Aung Myint and wife, senior military officers of the Office of the Commander-in-Chief (Army) and their wives, the commander of Yangon Command, acting Commandant of the DSI-NPS, senior officers of Yangon Station, invited guests, parents and relatives of the trainees.
First, Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing took the salute of the graduate trainee companies and inspected them. Next, trainee companies saluted the Senior General in slow march-past and quick march-past.
Afterwards, the Senior General presented Best Trainee Award to Trainee No. 3815 Trainee Wai Phyo Hein, Excellent Award in Training to Trainee No. 3822 Trainee Thant Sin and Excellent Award in Studies to Trainee No. 3780 Soe Khant Aung of the 15th Intake of DSINPS.
Next, the Senior General presented Best Trainee Award to Trainee No. 135 Trainee Nan Ya Wai Paing, Excellent Award in Training to Trainee No. 119 Trainee Su Mon Naing and Excellent Award in Studies to Trainee No. 164 Trainee Aye Thawda Min of the 2nd Intake of Lady Nursing Sciences.
In his address, the Senior General said the trainees were being taught five basic principles of nursing spirit -- devotion, goodwill, kindness, sacrificing and modality -- so that they would be imbued with qualifications ofagood nurse. They have already undergone theoretical and practical training to beagood nurse. So, they should provideawide array of health services ranging from diagnoses, disease prevention and control and health promotion to rehabilitation and medicine production apart from healthcare for the families and the public at the places they are assigned to.
The Senior General said the Tatmadaw is promoting individual intellectual and physical abilities of the members of the corps in giving priority to quality. The individual qualification of every soldier matters in turning the Tatmadaw into modern and compact armed forces. So, it is promoting physical and intellectual strength of every soldier which is his qualification through constant trainings. In so doing, it is essential for every solider to have five basic abilities—“spirit, discipline, allegiance, unity and three capabilities”.
A strong Tatmadaw is also an essential need for buildingastandard army. Building up the Tatmadaw requires quality as well as quantity. In acquiring quantity, it is necessary to prevent unnecessarily decreasing strength resulting from being unhealthy. Meanwhile, every Tatmadawman must try to stay healthy to improve their quality. Those who completed the above training courses are to work hard on providing healthcare by applying the paramedical subjects they have been taught so that Tatmadawmen can be fit and healthy.
Every individual needs to improve their ability by constantly learning modern treatments and branches of medical studies. To do so, necessary teaching aid and infrastructures are being provided. Modern patient simulators, practical rooms for nurses and other quality assurance facilities have been provided. Moreover, plans are underway to set up common laboratories. As the libraries are being upgraded for learning health-related subjects, paramedical staff have to continue to study higher level pharmaceutical and paramedical subjects by making combined use of such facilities and the experience they have gained from practical field.
While studying modern medical subjects, they must not neglect the strong potency of traditional Myanmar medicine. The ancestors were able to make effective use of precious traditional herbs grown on Myanmar’s soil. Since the subject of traditional medicine they have been taught is based on making medicines from naturally-grown herbs, systematic study of medicinal plants based on herbalism will contributealot to the healthcare sector. There are already historical records that healthcare services were provided in ancient Myanmar Tatmadaw with the use of traditional medicine. Thus, they are required to be well-versed in both Western medicine and traditional medicine in order that they become skilled and proficient paramedical staff. In this context, meeting set standards is also important, said the Senior General.
It can be seen that units of medical services dutifully carried out health care services for the families of Tatmadawmen and the people as well as discharged State defence duty in its traditions. In so doing, Tatmadaw mobile medical teams from medical services are assigned to hilly regions, plains, seas, coastal regions and border areas to conscientiously give tasks of health care services to the people regardless of races and religions with goodwill. It is important for ensuring health and fitness of everybody. As such, all the people in the region will have to work for regional development. The mobile health care teams of the Tatmadaw are implementing such aims. It is of great invaluable for the State that strength of the most of the people having health and fitness can contribute towards all sectors including economic, social and education sectors. Only when number of healthy and workable people increases, will the regions develop. Hence, mobile health care services directly serve the interest of the people as well as contribute much to regional development on one hand. As such, the Tatmadaw is successfully carrying outadefence duty as safeguarding the interest of the people by providing mobile health care services across the nation. As it is the most effective organizational task, the Senior General urged them to try hard to have effective and successful health care services for the people in their assigned areas by applying their experiences in medical subjects.
Then, the Senior General noted that as the Tatmadaw which was born together with independence struggles based on its experiences and concept cannot accept encroachment on Our Three Main National Causes, the Tatmadaw is safeguarding the State by upholding the Our Three Main National Causes asanational duty. The motto “the Tatmadaw never betrays the national cause” isaclear truth of the Tatmadaw for the State and citizens. The national cause to which the Tatmadaw never betrays is Our Three Main National Causes which are required for the State and the national people forever in any era and any system. In safeguarding Our Three Main National Causes, the Tatmadaw has adopted six peace principles for restoring eternal peace which is actually essential for peace and stability, unity and development of the nation based on its history and givesahelping hand to the government in peace making processes with genuine goodwill.
According to the actual situations of the nation, although areas for regions and states are divided with various names, it is important not to cause secession, breaking off and diversity for the form of the Union as various ethnics are residing in all regions of the nation unitedly. Therefore, the Senior General stressed the need to organize national brethren to carry out public welfare tasks in their assigned areas for enabling the ethnics to have maturity of their Union Spirit with the aim of restoring eternal peace and safeguarding Our Three Main National Causes.
The Senior General noted that always serving the public interest as dutiful endeavours in its history isafine tradition as well asaspecific character of the Tatmadaw. The Senior General urged them to train themselves to become good inheritor Tatmadawmen as well as reliable servicemen on whom the people love by emulating fine traditions of senior Tatmadawmen who have dutifully served the Tatmadaw and the people.
After taking the salute of the trainee companies, Senior General Maha Thray Sithu Min Aung Hlaing left the parade ground.
After the parade, the Senior General received outstanding trainees from the 15th Intake of Nursing and Paramedical Sciences and their parents and those of the 2nd Intake of the Lady Nursing Sciences together with their parents at the parlour of the main building of Defence Services Medical Academy and gave words of honour.
In his speech, the Senior General noted that parents nurtured those trainees from their childhood to the time when they passed the matriculation examination. It can be said that securing outstanding awards and standing on their own is paying back gratitude to the parents. However, as parents are grateful, the trainees should not forget their gratitude. Nursing and paramedical science must be applied in providing health care services to the people so as to promote good relations with the people based on five basic principles of nursing spirit. Every-body said an ordinary patient will haveahalf relief from sufferings if one receives sympathetic relations. As such, members of medical services need to uphold sympathy for patients. Promotion of ranks would depend on their efforts. The Senior General urged those outstanding trainees not to reduce utmost efforts as they won the outstanding awards due to their hard working the whole training period. The Senior General stressed the need to control their subordinates under 16 characteristics of leadership in order to abide by disciplines. Moreover, he said it is necessary to follow the disciplines issued by the Tatmadaw.
Afterwards, the Senior General and party inspected skill demonstration on providing medical treatments to those injured in the military operations at the tactical operations command level battlefield hospital and division level mobile battlefield hospital performed in the main hall of the Defence Services Medical Services. Officials con-ducted them round the demonstration.
After hearing the reports, the Senior General instructed officials to provide more training aid and equipment and to hold subject-wise skill demonstrations after giving systematic training to the trainees to have efficient skills.
29 12 2017 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
29 12 2017 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ပြင်ဦးလွင် ပန်းပွဲတော်ရာသီတွင် မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်ကားလမ်းများ ပိတ်ကာ ခရီးသွားများ အချိန်ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်ပေါ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ ပန်းပွဲတော်ကျင်းပ နေခြင်းကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် ဧည့်သည်များပြား နေသဖြင့် မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းများ ပိတ်ကာ ခရီးသွားများ အချိန်ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ယာဉ်မောင်းများထံမှ သိရသည်။
"ပြင်ဦးလွင်နဲ့ မန္တလေးဆိုတာက ပုံမှန်မောင်းရင်တော့ နှစ်နာရီခွဲလောက်ပဲ မောင်းရတာပါ။ အခုဆိုလမ်းတွေက အဆင့်မြှင့်တင်နေပြီး တိုးချဲ့နေတဲ့အတွက် လမ်းပိတ်နေတော့ လေးနာရီလောက် မောင်းရပါတယ်။ ဒီလို
ဒီဇင်ဘာလ မှာဆိုရင် ပန်းပွဲတော်ကလဲရှိနေတော့ ပိုပြီးတောင်လမ်းတွေ ပိတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းကို မောင်းနေတော့ အချိန်ကို လေးစားရပါတယ်။ ခရီးသည်တွေအတွက်လဲ အများကြီးစဉ်းစားပေးရပါတယ်"ဟု မန္တလေး-မူဆယ် ပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မန္တလေးဘက်မှ ပြင်ဦးလွင်သို့ သွားသည့် အတက်၊ အဆင်းလမ်းများသည် ပန်းပွဲတော်ရာသီဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့တတ်ပြီး အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပိုမိုဆိုးရွားတတ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်ဆိုရင် တနင်္လာနေ့ မနက်အစောကြီးကတည်းက တက်လာခဲ့ပေမယ့် ၁၆ မိုင်ကျော်ကတည်းက အတက်လမ်းတွေ ပိတ်နေပါပြီ။ အချိန်ကိုဂရုစိုက် နေရပါတယ်။ အတက်လမ်းမှာက လမ်းပြင်နေတော့ ပိုပြီး
ဆိုးပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ပန်းပွဲတော်လဲရှိနေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ အေးအေးဆေးဆေးလေး မောင်းချင်ရင်တော့မနက် ၅ နာရီလောက်ကတည်းကနေ တက်မှကို အဆင်ပြေမှာပါ"ဟု အဆိုပါလမ်းတွင်သွား
လာနေသည့် ဦးထွန်းထွန်းက ပြောပြသည်။
ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသည့်ပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်ကာ လူအများစိတ်ဝင်စားသဖြင့် ပွဲတော်ရက်များအတွင်း သွားရောက်လည်ပတ်သူ များပြားနေကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့ရှိ ပြည်နယ်လျှပ်စစ် ရုံးဝန်းအတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့ ကန်အောက်ရပ်ကွက် နယ်မြေ (၅) ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်ရှိ ပြည်နယ်လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ရုံးဝင်းအတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် ညပိုင်းက မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လျှပ်စစ်ရုံးဝင်းအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ငှားရမ်းအသုံးပြု ထားသောအဆောက်အအုံ အတွင်းဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာတို့ကို ဆက်သွယ်၍ အားသွင်းထားရာမှတစ်ဆင့် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"အဆောက်အအုံအတွင်းမှာ ထားတဲ့ ဘက်ထရီနဲ့ အင်ဗာတာကို ဆက်သွယ်ပြီး အားသွင်းထားရာ ကနေတစ်ဆင့် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။ မီတာခကောက်ခံတဲ့ ရုံးစာရွက်၊ စာတမ်းတွေထားရှိတဲ့ အဆောင်ပါ။စာရွက်၊ စာတမ်းတွေတော့ မီးလောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်"ဟု ရှမ်းပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ရာသို့ရှမ်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပြည်နယ်စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံစိုင်းနှင့် ပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၊ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၊ တောင်ကြီး ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြို့နယ်မှူး၊ တောင်ကြီးမြို့မ ရဲစခန်းမှူးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်ခဲ့ကာ ဒေသခံများနှင့်အတူ မီးသတ်ယာဉ်ခုနစ်စီး၊ ရေသယ်ယာဉ် သုံးစီးဖြင့်ဝိုင်းဝန်း ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များထိခိုက်မှုမရှိဘဲ အဆောက်အအုံ တန်ဖိုးငွေကျပ် ၂၆သိန်း၊ ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးတန်ဖိုး ငွေကျပ်နှစ်သိန်း၊ ဆိုင်ကယ် တစ်စီးတန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၅ဝဝဝဝ၊ ဘက်ထရီအိုးတစ်လုံး တန်ဖိုး ငွေကျပ် ၂ဝဝဝဝ၊ အင်ဗာတာတစ်လုံး တန်ဖိုးငွေကျပ် ၃ဝဝဝဝ၊ ပရင်တာတစ်လုံးတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၃ဝဝဝဝခန့် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း ၃ဝကျော်ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူ ဦးဟန်မော် လင်းသီဟ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီမှ အုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ခံကို တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၁ဝ၆၁/၂ဝ၁၇၊ မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ-၂၈၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by myawady at 5:08 PM No comments:
ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်းတွင် ၂၂ ဘီးယာဉ်နှစ်စီး တိုက်မိရာမှ ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်း နှစ်နာရီခန့် ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲမြို့နယ် ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်းတွင် ၂၂ဘီး ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မိရာမှ ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်း နှစ်နာရီခန့် ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ် ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (လားရှိုး)မှ သိရသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ် ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်း ရေကန်တောင်အနီး ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၈၆/၄) နှင့် (၈၆/၅) အနီးတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၆နံနက် ၈နာရီ ၄၅ မိနစ်က ကျောက်မဲဘက်မှ နောင်ချိုဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဘုန်းသက်နိုင် (ဘ) ဦးလှအောင် အေးသုခလမ်းစက်မှု (၁)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နေသူမောင်းနှင်လာသည့် 1H/---၂၂ဘီး အဖြူရောင် တွဲယာဉ်သည် အခင်းဖြစ်နေရာ လမ်းကွေ့အရောက်တွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဝဲဘက်ခြမ်း သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး နောင်ချိုဘက်မှ ကျောက်မဲဘက်သို့ ဆန်အိတ် ၆၇၅ အိတ်တင်ဆောင်၍ ယာဉ်မောင်းဦးလှိုင်မျိုးဦး(ဘ) ဦးအေး၊ အာရှလိုင်းကုမ္ပဏီ၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေသူ မောင်းနှင်လာသည့် 1E/---- ၂၂ဘီး အနီရောင်တွဲယာဉ်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဝင်ရောက် တိုက်မိခဲ့သည်။
ထိုသို့တိုက်မိမှုကြောင့် ဆန်အိတ် တင်ဆောင်လာသော ၂၂ဘီးကား၏ ခေါင်းနောက်ပိုင်း ဝဲဘက်ခြမ်းရှိ လေအိုးနှင့် ဘက်ထရီအိုးများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး 1H/---- ၂၂ဘီးတွဲကားတွင် ရှေ့ခေါင်းပိုင်းပျက်စီး ကာလူများ ထိခိုက်မှုမရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ဂုတ်တွင်းလမ်းပိုင်းမှာ ကားတိုက်တော့လမ်းက ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလမ်း မကြီးလဲဖြစ်၊ ကုန်စည်စီးဆင်းရာ လမ်းကြောင်းလဲဖြစ်တော့ ကားတော်တော်များများ ပိတ်ဆို့သွားခဲ့ပါတယ်။ စပိတ်တာကတော့ နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာပိတ်ပါတယ်။ နံနက် ၁ဝ နာရီ ၂၅ မိနစ်မှာ တစ်ဖက်ပိတ် တစ်ဖက်ဖွင့်စနစ်နဲ့ ကားတွေကို လွှတ်ပေးတယ်။ ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာတော့ လမ်းကြောင်းက ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ပွင့်သွားပါပြီ။ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တဲ့အတွင်းမှာ ဂုတ်တွင်း လမ်းပိုင်းတာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပေါင်းပြီး ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်"ဟု ပြည်နယ်ဒုတိယ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိက ပြောပြခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ယာဉ်မောင်းဘုန်းသက်နိုင်ကို နောင်ပိန်နယ်မြေရဲစခန်းက ယာဉ် (ပ)၄၆/၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ်ြကီး ပဒု မ် -၂၇၉ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 5:06 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းကို နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများ လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန် အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်မည်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သက်တမ်းရင့် အားကစားကွင်း တစ်ကွင်းဖြစ်သည့် အောင်ဆန်း အားကစားကွင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများ လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် အကြီးစား ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီး လိဂ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဌေးထံမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများ လက်ခံကျင်းပနိုင်ရန် အားကစားကွင်းများ အနေဖြင့် သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းနှင့် အောင်ဆန်းအားကစားကွင်း တို့ရှိနေသော်လည်း နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများကို သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း တစ်ခုတည်းတွင်သာ ကျင်းပနေရသောကြောင့် အောင်ဆန်းအားကစား ကွင်းကိုလည်း နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စီစဉ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသမီးလိဂ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဌေးက"အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းကို အကြီးစားပြင်ဆင်ဖို့ဆောင် ရွက်နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့က ကွင်းကိုပြန်သိမ်းတာမဟုတ်ဘဲ ကွင်းပြုပြင်ဖို့ ခဏပြန်ယူတဲ့ သဘောပါ။ ဒီကွင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကအကုန်ကျခံပြီး ပြုပြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်တိုးမြှင့် ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို နှစ်ရှည်ပြန်လည် ငှားရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်"ဟု ပြောပြသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ပြည်တွင်းပွဲစဉ်များ ဖြစ်သည့် မြန်နေရှင်နယ်လိဂ်၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်-၂၊ လူငယ်ပြိုင်ပွဲများနှင့် အမျိုးသမီးလိဂ်ပြိုင်ပွဲများ ထည့်သွင်းကျင်းပ မည်ဖြစ်သောကြောင့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှသာ အောင်ဆန်း အားကစားကွင်းကို ပြင်ဆင်ဖွယ်ရှိသည်။
ထို့ပြင် KBZ Bank Women's League 2017-2018ပြိုင်ပွဲ၏ ပွဲစဉ်များအားလုံးကို အောင်ဆန်းအား ကစားကွင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 5:04 PM No comments:
မြေတိုင်းတာရာတွင် UAV Drone များဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ သမားရိုးကျ မြေတိုင်းတာမှု စနစ်များအပြင် မြေတိုင်းရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန် တိကျစေရေးအတွက် UAV Drone များဖြင့် မြေတိုင်းတာပုံထုတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် မကွေး၊ဂန့်ဂေါ၊ ပခုက္ကူ၊ သရက်နှင့် မင်းဘူးခရိုင်တို့မှ ဌာနဝန်ထမ်းသင်တန်းသား ၄၅ ဦးအား မကွေးမြို့၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်မှ ၃၁ ရက်အထိ သင်တန်းပို့ချ ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ဧက ၄ဝဝ ရှိကွင်းတစ်ကွင်းအား သမားရိုးကျတိုင်းတာပါက ၇ ရက်မှ ၁ဝ ရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပြီး ယခုသင်တန်းက ပို့ချမည့်စနစ်ဖြင့် Drone အသုံးပြုတိုင်းတာပါက ၂ ရက်ခန့်သာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမို၍ တိကျမှုရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
''မြေတိုင်းတဲ့နေရာမှာ အဆင့်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီအဆင့်တွေကို ကျော်လွှားပြီးတော့ Drone နဲ့တိုင်းတဲ့စနစ်ကို သင်ကြားပို့ချ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်စနစ်တွေက အရမ်းကြာတယ်။ အခုစနစ်နဲ့ဆိုရင် အချိန်ရော၊ လူအင်အားရော တိကျမှုပါ အရမ်းကွာခြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု သင်တန်းနည်းပြ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (ငြိမ်း) ဦးစိန်ဝင်းက ပြောသည်။
''တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က Drone ငါးစင်းဝယ်ယူဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ချွေတာတဲ့အနေနဲ့ Drone လေးစင်းနဲ့ရရှိတဲ့ Data တွေကို အသေးစိတ်ပြုစုနိုင်ဖို့ Software တစ်ခုဝယ်ပါတယ်။ ဒီလိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ မြေယာအသုံးချမှုတွေ၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် လယ်ယာမြေဧက ဘယ်လောက် ရေနစ်တယ်ဆိုတာ တွေကို ဒီစနစ်နဲ့တိုင်းထွာရင် ချက်ချင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ တိုင်းဒေသကြီး အတွက်ရော၊ ဌာနအတွက်ပါ အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်'' ဟုတိုင်းဒေသကြီး လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးဌာနမှူး ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေလပိုင်းက တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မြေကြီးမြေပုံမှန်ကန်ရေးနှင့် မြေတိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်တိကျ စေရေးအတွက် အဆိုပါ UAV Drone ငါးစင်းကို ဝယ်ယူရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအတွက် စာစစ်ဌာနပေါင်း ၁၄ဝ ကျော် အသစ်ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြု
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနိုင်ရန် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စာစစ်ဌာနပေါင်း ၁၄ဝ ကျော်အထိ အသစ်ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးညွန့်ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါအသစ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခဲ့သော စာရင်းအရ စာစစ်ဌာနပေါင်း ၁၄ဝ ကျော်ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုသော်လည်း ယင်းအနက်မှ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်ရှိ၍ လျှောက်ထားသည့် ကျောင်းပေါင်း ၁ဝ ခုသာ ရှိကြောင်း၊ စာစစ်ဌာနအသစ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရ စာရင်းများကို ယခုလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများသို့ ပြန်လည်ချထားမည်ဖြစ်ပြီး၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အတွက်စာစစ်ဌာန အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုပါက အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ၍ သတ်မှတ်ချက် ၁၉ ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှသာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် စာစစ်ဌာနတွင် ဖြေဆိုမည့်ကျောင်းသားဦးရေနှင့် တစ်ဦးချင်းအလွတ် ပညာသင်အဖြစ် ဖြေဆိုမည့်ဦးရေ၊ လက်ရှိ အခြေအနေအရ မည်သည့် စာစစ်ဌာနခွဲတွင် သွားရောက်ဖြေဆိုရခြင်း ထိုသို့ဖြေဆိုနေရသည့် အခက်အခဲများကိုလည်း တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နေရာထိုင်ခင်းလုံလောက်မှု၊ စာစစ်ဌာနအသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် ဒေသ၌ မြို့နယ်၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းရှိ၊ မရှိနှင့် မေးခွန်းလွှာနှင့် အဖြေများသိမ်းဆည်းရန် ဘဏ်၊ ငွေတိုက်၊တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့၊ ရဲစခန်းရှိ၊ မရှိ၊ စာဖြေသူအများဆုံး ဝင်ဆံ့နိုင်မည့်ဦးရေ၊ စာဖြေသူဦးရေ တိုးတက်လာပါက နေရာချထားပေးမည့်ပုံစံ စသည့်အချက်အလက်များ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပစာစစ်ဌာနပေါင်း ၁၅ဝဝ ကျော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ထက် စာစစ်ဌာနပေါင်း ၁၂ဝ ကျော် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာရေချိုပုစွန်တုပ် ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နေ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ရှူးတစ်စတားကုမ္ပဏီနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဘိုင်အိုတက်စ်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာရေချိုပုစွန်တုပ်ကို မွေးမြူကာ ပြည်တွင်း၌သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများအထိ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးလှဌေးထံမှ သိရသည်။
မြန်မာမျိုးရင်းစစ် ရေချိုပုစွန်တုပ် မျိုးသားပေါက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့နယ်၌ မွေးမြူမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မျိုးဖောက်မွေးမြူနိုင်ပါက ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်ဖြန့်ဖြူး တင်ပို့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
''လက်ရှိ မွေးမြူထားတဲ့ မျိုးပုစွန်တုပ်တွေကို မယူပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဘိုင်အိုတက်စ်ကုမ္ပဏီရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကန်ထဲမှာ သဘာဝအတိုင်း မျိုးစပ်ပြီး ရေချိုပုစွန်တုပ်တွေကို မွေးမြူသွားမယ်။ အကောင်ရေ သိန်း ၄ဝ အထိ မွေးမြူနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ မွေးမြူပြီးရလာတဲ့ သားပေါက်တွေအားလုံးကို မျိုးအဖြစ် ပြည်တွင်းမှာပဲ ဖြန့်ဖြူးဖို့ရှိတယ်။ ဈေးနှုန်းကိုလည်း လက်ရှိဈေး ထက်လျှော့ချပြီး ရောင်းချပေးမယ်။ တကယ်လို့ ပြည်တွင်းမှာ ဝယ်ယူသူ မရှိဘူးဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံကို တင်ပို့မှာပါ''ဟု ဦးလှဌေးက ပြောသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာမျိုးရင်းစစ် ရေချိုပုစွန်တုပ်ကို မျိုးဖောက်ရန် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးဘိုကလေး၊ ဖျာပုံနှင့် လပွတ္တာမြို့နယ်တို့၌ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် တွံတေးမြို့နယ် မွေးမြူရေးကန်၌ တစ်ဧကလျှင် ရေချိုပုစွန်တုပ်အကောင်ရေ နှစ်သောင်းမှ သုံးသောင်းအထိ မွေးမြူနိုင်သောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် မြန်မာ့မျိုးရင်းစစ် ရေချိုပုစွန်တုပ်ကို အကောင်ရေသိန်း ၄ဝ အထိ မျိုးဖောက်၍ ဖြန့်ဖြူးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းပဲမျိုးစုံ ဈေးကွက်သစ်ရရှိနိုင်ရေး တရုတ်နိုင်ငံ၌ မိတ်ဆက်ပြသရန် စီစဉ်
ပြည်တွင်း၌ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိ နေသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် ပဲအမျိုးအစားများကို ဈေးကွက်ချိတ်ဆက် တင်ပို့နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Myanmar Beans Market Promotion Forum ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ရှီးဒေသရှိ နန်နင်းမြို့၌ ကျင်းပရန်စီစဉ်နေကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန အကြီးတန်းအရာရှိ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
''အဓိကအားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိတော့တဲ့ ပဲအမျိုးအစားတွေအတွက် ဈေးကွက်သစ်တွေ ရှာဖွေတာပါ။ အတွေ့အကြုံအရ ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းကို အားကိုးလို့မရပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကို မတင်ပို့ဖူးသေးတဲ့ ပဲအမျိုးအစား အမယ်သစ်တွေကို ဘယ်လိုမျိုး စားသုံးနိုင်မယ်၊ တရုတ်ကလုပ်တဲ့မုန့်တွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး သုံးနိုင်မယ်ဆိုတာကို ဒီပြပွဲကနေ သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးဖက်ဝင်ပဲ အမျိုးအစားတွေကိုပြသပြီး ဈေးကွက်သစ်မိတ်ဆက်မယ့်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်တွင်းမှပဲစိုက် တောင်သူများအတွက် နစ်နာမှုမရှိစေရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိတော့သည့် ပဲအမျိုးအစားများအတွက် ဈေးကွက်သစ် ရှာဖွေခြင်းနှင့် ဝယ်လက်ချိတ်ဆက်ခြင်း တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ပဲ၊ နှမ်း လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပွဲတွင် ပြည်တွင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များကို ပါဝင်ပြသရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး စိတ်ပါဝင်စားပါက မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ဖုန်း-ဝ၁-၂၅၄ဝ၂၄ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်သာမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်
တပ်မတော်နယ်လှည့် အထူးကုဆေးအဖွဲ့က ဒေသခံပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးစဉ်။
တပ်မတော်နယ်လှည့်အထူးကုဆေးအဖွဲ့က ခွဲစိတ်လူနာတစ်ဦးအား လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးစဉ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်သာမြို့ နယ်ရှိ ဒေသခံပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်နယ်လှည့် အထူးကုဆေးအဖွဲ့သည် ယနေ့တွင် တောင်သာ မြို့နယ်၊ ကျောဇီကျေးရွာတွင် အခြေပြု၍ အဖွဲ့(၁) သည် ဇဂျန်းကျေးရွာနှင့် ကန်မြဲကျေးရွာတို့၌ လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့(၂)သည် နတ်စောင့်ကျေးရွာ၌ လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့(၃)သည် ကျောဇီကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်း၌ လည်းကောင်း ဒေသခံပြည်သူ ၁၅၃ဝ ဦးတို့အား လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ရောဂါ ၂၈၉ ဦး၊ ခွဲစိတ်ရောဂါ ၇၉ ဦး၊ ကလေးရောဂါ ၇၆ ဦး၊ သားဖွား/မီးယပ်ရောဂါ ၃၉ ဦး၊ အရိုးရောဂါ ၁ဝ၃ ဦး၊ နား/နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းရောဂါ ၇ဝ ဦး၊ မျက်စိရောဂါ ၄၈၁ ဦး၊ သွားရောဂါ ၁၃၁ ဦး၊ အထွေထွေရောဂါ ၂၆၂ ဦးတို့အား လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
၎င်းတို့အနက် မျက်စိခွဲစိတ် လူနာ ၃၄ ဦး၊ အရေးပေါ်စိတ်ခွဲ လူနာ ရှစ်ဦးနှင့် သွားခွဲစိတ်လူနာ၁၂၉ ဦးတို့ကို ခွဲစိတ် ကုသမှုများဆောင်ရွက် ပေးပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်လူနာ ၅ဝ ဦး၊ တယ်လီ ဗေးရှင်းဓာတ်မှန်ရိုက်လူနာ ၄၇ ဦး၊ ECG စက်ဖြင့် နှလုံးစမ်းသပ်လူနာ ၇၃ ဦးနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု ၆၁ ဦးတို့ကို ရောဂါရှာဖွေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ကာ ခွဲစိတ်ခန်း၌ ကလေးတစ်ဦးအား အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
28 12 2017 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
28 12 2017 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ဆလုံလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို လေ့လာနိုင်ရန် ပြတိုက်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်မည်
ဆလုံလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို လေ့လာနိုင်စေရန် မျိုးဆက် ဆက်လက်တည်တံ့ နေစေရန်အတွက် ပြတိုက်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သတင်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ပြတိုက်တည်ဆောက်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဦးဆောင်ကာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆလုံလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက် အစွန်ဒေသများဖြစ်သည့် မြိတ်၊ ကော့သောင်းနှင့်ဘုတ်ပြင်း မြို့နယ်ဒေသတို့တွင် အများဆုံးနေထိုင်လျက်ရှိရာ ရေကူးရေငုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြပြီး ပင်လယ်ခရု၊ ကမာကောင်၊ ငါးကြီးအန်ဖတ်၊ ပင်လယ်ရေမှော်၊ ပုလဲ၊ ငှက်သိုက်၊ ပျားရည်နှင့် ပရဆေးများကို ရှာဖွေအသက်မွေး ကြကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆလုံတိုင်းရင်းသားများကို မော်ကင်းဟုလည်း ခေါ်ကြကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ယခင်ကထက် လူဦးရေ နည်းပါးလာနေပြီဖြစ်၍ ဆလုံ လူမျိုးများ၏ မျိုးဆက်များ ဆက်လက်တည်တံ့နေ စေရန်နှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို အများပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ လေ့လာနိုင်စေရန် ပြတိုက်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆလုံ လူမျိုးများအတွက် လူနေမှု အကျပ်အတည်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါပြတိုက်ကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ကာ ပညာရှင်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ ဆလုံလူမျိုးများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ဆလုံတိုင်းရင်းသား များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြပွဲများ၊ပြိုင်ပွဲများနှင့် ရိုးရာပွဲတော်များကို နှစ်စဉ် ကျင်းပ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဆလုံတိုင်းလူမျိုးများ အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများက စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာကာ ဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ၁၁ နှစ်အတွင်း ကြက်သွန်နီဈေး ဒုတိယအမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဈေးပြန်လည်ကျနိုင်ဟုဆို
၂ဝဝ၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ၁၁နှစ်အတွင်း မန္တလေးမြို့ကြက်သွန် ဈေးကွက်တွင် ကြက်သွန်နီဈေးမှာ ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ဈေးသို့ရောက်ရှိနေပြီး ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်ခန့်တွင် ဈေးပြန်ကျနိုင်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စားဖိုဆောင်သီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများအသင်းမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မန္တလေးမြို့ ကြက်သွန်ဈေးကွက်၌ ကြက်သွန်နီ တစ်ပိဿာလျှင် (ပွဲရုံဈေး) ထိပ်စငွေကျပ်၂၅ဝဝ၊ အောက်စ ငွေကျပ် ၁ဝဝဝမှ ၁၂ဝဝဈေးထိရှိနေပြီး မြစ်သားနှင့် ကျောက်ဆည် ကြက်သွန်နီများ အဓိက ဝင်ရောက်နေကာ ရွှေဘိုကြက်သွန်နီ အနည်းငယ် စတင်ဝင်ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။
"ကြက်သွန်နီ အဓိကထွက်တဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွေမှာတော့ ကြက်သွန်နီ ထွက်နေပြီ။ ကြက်သွန်နီ အရည်အသွေး မမီသေးလို့တူးဖို့စောင့်ရင်း အချိန်မီ မပို့နိုင်သေးတော့ တစ်လလောက် လက်ရှိဈေးအတိုင်းပဲ သွားနေဦးမယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းလောက်မှ ဈေးပြန်ကျနိုင်မယ်"ဟု အဆိုပါအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောပြသည်။
မန္တလေးကြက်သွန်နီ ဈေးကွက်တွင် ၂ဝ၁၅ခုနှစ်က ကြက်သွန်နီ တစ်ပိဿာလျှင် ငွေကျပ်၃ဝဝဝ ထိဈေးအမြင့်ဆုံး ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၆ခုနှစ် နောက်ပိုင်း၌ ယခုနှစ်တွင် ကြက်သွန်နီဈေး ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဈေးသို့ ရောက်ရှိခြင်း
ယခုနှစ်တွင် ကြက်သွန်အဓိက ထွက်ရှိသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့၌ ကြက်သွန်နီပျိုးပင်စိုက်ဧကများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ပြားခဲ့သည့်အတွက် ကြက်သွန်နီဈေး မြင့်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။